Idi Kachasị mma Multiaxial Manipulator Onye nrụpụta na ụlọ ọrụ |Tongli
Multiaxial manipulator bụ multi-ebumnuche manipulator nke nwere ike na-aghọta akpaka akara, repeatable mmemme, multi-ogo nke nnwere onwe, multi-ogo nke nnwere onwe nke ngagharị na guzosie nri-n'akuku mmekọrịta na space.The ụzọ ọ na-arụ ọrụ bụ isi site na-emecha linear ngagharị tinyere. axe X, Y na Z.
1. Ntughari nnwere onwe;2. Njikwa akpaaka na mmemme na-emegharị;3. Na-agbanwe agbanwe na ọrụ dị iche iche dịka ngwaọrụ arụ ọrụ dị iche iche;4. Ịtụkwasị obi dị elu, oke ọsọ, oke nkenke.
Dị ka usoro usoro dị ọnụ ala ma dị mfe maka ngwọta sistemu robot akpaghị aka, enwere ike iji ọtụtụ ndị na-eme ihe na-ekesa, nsị plastik, spraying, palletizing, nhazi, nkwakọ ngwaahịa, ịgbado ọkụ, nhazi ígwè, njikwa, nbudata na nbudata, mgbakọ ụlọ ọrụ nkịtị. ubi mmepụta dị ka, mbipụta, wdg, nwere uru ngwa dị mkpa n'ihe gbasara dochie ọrụ, imeziwanye mmepụta mmepụta ihe, na ịkwado àgwà ngwaahịa.Maka ngwa dị iche iche, e nwere ihe dị iche iche chọrọ imewe maka multi-axis manipulators, dị ka ịhọrọ ụzọ nnyefe dị iche iche dị ka ihe achọrọ nke ziri ezi na ọsọ ọsọ, na ịhọrọ ngwaọrụ clamping dị iche iche (ihe ndozi, grippers na mounting frame, wdg) maka njedebe na-arụ ọrụ. isi dị ka kpọmkwem usoro chọrọ, yana nhọrọ imewe maka nkuzi mmemme, nhazi nhazi, njirimara anya na ụdị ọrụ ndị ọzọ, ka o wee nwee ike izute ngwa ngwa nke ubi dị iche iche na ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
Robot multi-axis bụ rọbọt ebumnuche izugbe nwere ọdịdị na nhazi kọmpat.A na-eji nkwonkwo nke ọ bụla nwee ihe nbelata dị elu nke ọma.Njikọ ọsọ ọsọ dị elu nwere ike ịrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe.Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka njikwa, palletizing, mgbakọ, na ịkpụzi injections.Usoro ntinye.
Ngwa ndị bụ isi bụ ndị a
(1) Njikwa ihe na palletizing (2) Nkwakọ ngwaahịa na mgbakọ (3) Echicha na polishing (4) Laser ịgbado ọkụ (5) ntụpọ ịgbado ọkụ (6) injection ịkpụzi (7) Ịcha / deburring
● Nabata usoro nke servo moto na reducer, nke nwere ike ibu ibu, nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ, ngwa ngwa ngwa ngwa na nkenke dị elu.
● Onye njikwa usoro nchịkwa dị mfe ma dị mfe ịmụta, nke dị mma maka mmepụta ihe.
● Ahụ́ rọbọt na-anakwere wiwi dị n'ime ime, nke na-adịghị ize ndụ na gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Onye nrụpụta maka injinia ụgbọ ala - Gantry Manipulator – Tongli
Osote: Truss Manipulator